Saturday April 04, 2020 - 09:08:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhimashadii ugu badnaa oo maalin qura uu Carona Virus ka geysto caalamka ayaa shalay ka dhacay wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda America.
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in dhimashada Carona ay gaartay 7500 oo qof halka ay la xanuunsanyihiin dad ka badan 220 kun oo ruux.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in shalay oo kaliya ay Mareykanka Carona ugu dhinteen ugu yaraan 1480 qof American ah badankoodna waxay ku dhinteen magaalada New York oo ah caasimadda dhaqaalaha Mareykanka.
Xaakimka gobolka Washington ayaa warbaahinta u sheegay in magaalada caasimadda ah ay ku suganyihin 92 Kun oo qaba Viruska Carona, mas'uuliyiinta Americanka ah waxay sheegayaan in Carona u si xowlli ah ugu dhax fidayo bulshada.
Donald Trump oo warbaahinta kula hadlayay gudaha Aqalka cad ayaa saadaaliyay in dad gaaraya 100 kun illaa 240 kun ay wadankiisa ugu dhiman doonaan caabuqa Carona wuxuuna niyad xumo ka muujiyay dadaallada ladoonayo in lagu xadeeyo cudurka.